Ny fanadihadihana matihanina sy feno indrindra momba ny haitraitra maivana!
Home / Interior design / Ny fanadihadihana matihanina sy feno indrindra momba ny haitraitra maivana!
2020 / 10 / 18 FisokajianaInterior design 1305 0
Ny fomba mavitrika mavitrika dia fomba famolavolana, fa fomba fiaina ihany koa, mifantoka amin'ny fahombiazan'ny fiainana tsotra, milamina, ambany ary voafehy, na dia tsy hahafoana ny andriana sy ny haitraitra. Ilay antsoina hoe fandaniam-bola tafahoatra, araka ny anarany, dia "rendrarendra malefaka" dia azo raisina ho "rendrarendra ambany".
Ahoana ny fomba hitantanana ny fomba famolavolana mihoampampana? Fanazavana amin'ny faritra 4.
Fantaro ny tonon'ny hazavana sy ny fomba mihoampampana
Fitaovana dimy mahazatra ampiasaina amin'ny fomba maivana sy be loatra
Lalaom-paleta mahazatra maromaro momba ny fomba maivana sy be loatra
Fomba maivana sy mihoapampana ary fomba hafa amin'ny famoronana fusion
Fomba maivana sy mihoampampana
Ny rivotra mavomavo be dia be toy ny tonony, amin'ny alàlan'ny fanaka malefaka tsara tarehy, mamoaka tsiro tsara. Ny extravagance dia mety indrindra ho an'ny vondrona tanora, lamaody, kanto, toetra izy io. Voadio kokoa noho ny minimalista, mahazatra kokoa noho ny rendrarendra. Averina mangatsiaka na vaovao ary madio.
Fitaovana dimy mahazatra ho an'ny rivotra mahery vaika
Ny fikatsahana fomba mihaja hamoronana fomba endrika tsotra indrindra amin'ny fomba mihaja. Ny fahatsoran'ny fomba fiasa dia ny fanomezana ny haitraitra ny fitaovana, ilay antsoina hoe haitraitra ara-pitaovana dia tsy midika hoe fahatsapana firoboroboana lafo vidy sy lafo vidy, fa kosa milaza ny fahatsapana mahatalanjona an'ilay fitaovana mihitsy. Ny fitaovana dimy mahazatra indrindra dia ny: hoditra, vy, volony, marbra ary volory.
Voalohany indrindra, ny hoditra, ny zavatra vita amin'ny hoditra dia mahatsapa ho mendri-kaja sy tsara kalitao, raha jerena amin'ny hatsarana, ny hoditra dia manana endrika sy voamaina manokana, dia iray amin'ireo mampiavaka ny haitraitra maivana.
Ny manaraka dia vy, vy varahina, vy no solontena manokana, raha oharina amin'ny gilding teo aloha, gilding, gilding dia ho understated kokoa, fa miaraka amin'izay dia manana expressive manokana, afaka mampitombo ny vokany maso. Ny varahina metaly metaly dia ny fanehoana fahatsapana hazavana, mihoapampana ary ambany.
Matetika, ny metaly dia tsy mila ampiasaina amin'ny ambaratonga lehibe, fomba mihoapampana maoderina, ny vy dia ampiasaina ho firavaka, toy ny fanaka fanaka, zorony, firavaka sns.
Ny fahatelo dia ny volom-borona, ny volom-bolo dia mitovy amin'ny mink, volom-bolo tahaka, volom-borona, maneho ny mendri-kaja sy kanto, ny volom-borona ao amin'ny fikasihan-tanana dia afaka mamorona fahatsapana endrika manan-karena ihany koa, antsointsika hoe fahatsapana firafitra, mazava ho azy, raha te hanaraka tontolo iainana, afaka misafidy volom-borona artifisialy ihany koa isika ary afaka mamorona atmosfera maivana sy mihoapampana.
Ny lafiny iray hafa manandanja dia ny fampiasana marbra marobe. Raha ny tena izy, ny marbra dia ampiasaina amin'ny latabatra fanaka fanaka maoderina be dia be.
Farany, fitaovana iray izay fahita matetika amin'ny fomba maivana kokoa dia volory. Ity lamba vita amin'ny volory sy suède ity dia mazàna fitaovana premium kokoa ihany koa. Ity fitaovana ity dia mamorona ny fahatsapana ny fanomezana an'ny sofa sy ny rivotra lafo vidy.
Fifanarahana loko amin'ny fomba maivana maivana
Ndao hizara ny loko ampiasaina amin'ny habaka ho loko ambadika sy loko accent (izay nodiovina sy notsorina mba hahamora kokoa ny fahazoana azy ireo).
Ny loko ambadika
Ny fomba mavitrika mavitrika dia mazàna misafidy loko tsy miandany miaraka amina volondavenona avo lenta, toy ny rameva maivana, ivoara, curry ronono. Ny loko aorinan'ny loko dia mety ho maizina na maivana, ary hiteraka fahatsapana ny rivotra iainana samy hafa
Ny loko accent dia matetika ampiasaina amin'ny volamena, volafotsy, mainty ary fotsy. Azonao atao koa ny mampiasa loko matevina matevina kokoa hamelomana ny rivotra iainana. Ohatra, amin'ny sary etsy ambany, ny manga dia ampiasaina ho loko accent, izay mahatonga anao hahatsapa ho madio sy mahazatra
Ny fomba maivana sy mihoa-pampana mifangaro amin'ny fomba hafa
Ny haitraitra maivana dia lamaody marobe izay azo afangaro amin'ny fomba isan-karazany, afangaro amin'ny fomba amerikana, mitondra fahatsarana sy fahamoranana, mifangaro amin'ny fomban'ny sinoa, teraka ny toetrany atsinanana lamaody.
Tsy misy fomba azo oharina amin'ny fanandramana simia, miaraka amin'ny mari-pahaizana miligramy. Na dia fantatra miaraka amin'ny fomba mihaja aza dia misy ny mifantoka. Ireo teny roa voalaza tetsy aloha dia "cool cool" sy "fresh and clean". Azontsika atao ny mampiasa azy ireo ho toy ny andry roa amin'ny fomba mihaja. Eo anelanelan'ny bao roa hizarana.
Ary koa ny fomba mihoampampana. Ny teo aloha kokoa, ny farany maoderina kokoa, ny fanamafisana samy hafa. Ny fitsipika mitovy amin'izany. Tsy mahaleo tena ny fomba mihaja, raha vao takatrao ny fototr'ilay rendrarendra, dia mety ho fomba maro karazana ny fomba.
Previous :: Ny sira dia mety ho toerana mamy Mori, Mood Bourgeoisie Cozy voajanahary | ENJOYDESIGN Next: Minimalism maivana sy mihoapampana dia aestetika avo lenta!